Jiri nke ferrous sulfate na simenti
Ferrous sulfate monohydrate na-eji isi dị ka mbenata gị n'ụlọnga na ciment ụlọ ọrụ iji nweta a Cr (VI) ọdịnaya nke ihe na-erughị 2 mg / L. Na 30% monohydrated ụdị, ferrous sulfate bụ praịm-eji site na simenti ahịa iji belata hexavalent chromium. Ngwaahịa a bụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi nke kachasị dị ọcha nke ndị na-emepụta ciment nwere ike iji tụnyere nhọrọ ndị ọzọ na ahịa.
Ngosi ngosi oge
N'ihi ọrịa na-efe efe nke COVID-19, mgbochi njem, yana ejighị ihe zuru ụwa ọnụ na-aga n'ihu, EUROTIER 2020 na VIV ASIA 2021 na-agbanwe kalenda ngosi ya iji nweta ihe ngosi mpaghara mpaghara nke ọma n'oge ụbọchị kwesịrị ekwesị nke 2021.
AKW WEKWỌ AKW VKWỌ AKW NEWKWỌ AKW OFKWỌ AKW OFKWỌ
Iji nye ndị ahịa ọrụ dị elu ma na-arụ ọrụ nke ọma, RECH CHEMICAL emelitere ụdị nke weebụsaịtị ahụ site ugbu a gaa n'ihu. Na-atụ anya nkwado site na ndị ahịa dị ka mgbe niile. Anyị ga-enye ọrụ kacha mma mgbe niile.